12 Oktobra 2020 - FJKM Québec - Canada
11 octobre 2020 by Njaka Ramanandafy
Ny olona feno ny Fanahy Masina
ASAN’NY APOSTOLY 13 : 6-12
13:6 Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Barjesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka,
13:7 izay nitoetra tao amin’i Sergio Paolo, governoran’ny tany sady lehilahy hendry; ary izy nampaka an’i Barnabasy sy i Saoly hankao aminy ka naniry mba hahare ny tenin’Andriamanitra.
13:8 Fa i Elyma, mpanao ody (fa izany no anarany, raha adika), nanohitra azy roa lahy sady nitady hampivily ny governora tsy hanaiky ny finoana.
13:9 Fa i Saoly kosa, izay atao hoe koa Paoly, feno ny Fanahy Masina, dia nibanjina azy
13:10 ka nanao hoe: Ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalon’ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lalamahitsin’ny Tompo va ialahy?
13:11 Ary, indro, ankehitriny ny tanan’ny Tompo hamely an’ialahy, dia ho jamba ialahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao aminy niaraka tamin’ izay ny mampanjambena sy ny haizina, ary niraparapa nitady olona hitantana azy izy.
13:12 Ary ny governora, nony nahita izay efa natao, dia nino sady talanjona tamin’ny fampianaran’ny Tompo.
1-Sahy manambara ny fahadisoan’ny hafa
« Ialahy feno fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra , zanaky ny devoly sady fahavalon’ny fahamarinana rehetra » (and10)
Rehefa feno ny herin’ny Fanahy Masina iPaoly dia tsy nisalasala nilaza tamin’ny fahasahiana ny faharatsian’i Barjesosy mpamitaka, fetsy , mpanohitra sy mpamilivily ny teny fahamarinan’ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy . Noho ny herin’ny Fanahy Masina tao aminy no nahasahian’i Paoly niteny tahaka izany . Araka izany , rehefa itoeran’ny herin’ny Fanahy Masina ny olona manana fahasahiana hanambara ny faharatsian’ny hafa , indrindra ny fahavalon’ny Filazantsara . Koa mangataha amin’Andriamanitra sy Jesoa Kristy mba hanomezany anao hatrany ny Fanahy Masina hanana fahasahiana hanambara ny fahadisoan’ny hafa.
2-Sahy manambara ny loza hanjo ny hafa
« Ary , indro ankehitriny ny tànan’nyTompo hamely an’ialahy dia ho jamba ialahy ka tsy hahita masoandro aloha » (and11)
Noho ny herin’ny Fanahy Masina , izay niasa tao amin’i Paoly dia niteny tamin’ny fahasahiana izy fa ho tonga jamba i Barjesosy , ary ny tànan’Andriamanitra izay midika ny heriny sy ny fanatrehany no hahatonga izany . Dia tonga taminy izany loza izany . Marihana fa efa nihatra tamin’iPaoly izany fony izy mbola nanohitra ny Fiazantsara . Araka izany , ny olona izay manohitra ny Filazantsara dia hain’Andriamanitra ny manajamba azy mba tsy hahitany ny fahatsaran’ny fahazavan’Andriamanitra ao amin’i Jesoa Kristy . Koa angataho ny Fanahy Masina hitoetra ao aminao hatrany , hanananao fahasahiana hilaza loza vokatry ny tsy finoana amin’ny hafa ianao.
Inona ny fahasahiana anananao vokatry ny asan’ny Fanahy Masina ao anatinao ?